Top amoron-dranomasina 10 any Nouvelle Zélande izay tsy maintsy tsidihanao
Ny morontsiraka 15,000kms avy any avaratra ka hatrany atsimon'i Nouvelle Zélande dia manome antoka fa ny Kiwi rehetra dia manana ny hevitr'izy ireo momba ny torapasika tonga lafatra ao amin'ny fireneny. Ny iray dia simba amin'ny safidy eto noho ny karazany sy ny fahasamihafana atolotry ny morontsiraka amoron-dranomasina. Mety tsy ho ampy ny teny tianao hilazana ireo morontsiraka any Nouvelle Zélande fa ny hatsarana sy ny fiadanam-po natolotry ny torapasika dia tsy misy farany.
Toerana - Auckland, Nosy Avaratra
Nomarihina ho toy ny morontsiraka malaza sy mampidi-doza indrindra any Nouvelle Zélande, ireo mpitaingin-tsoavaly dia manondro ity morontsiraka ity ho ny tora-pasika handehanany eny ambonin'ny onja. Ny morontsiraka fasika mainty malaza dia malaza ihany koa amin'ireo mpizahatany sy ny mponina mandritra ny vanim-potoana fahavaratra noho ny fijerena ny onja sy ny fitsangantsanganana eny amoron-dranomasina. ny vatolampy liona mammoth izay eo amoron-dranomasina miaraka amin'ny Sary sokitra Maori manodidina azy dia tranokalan'ny mpitsidika malaza eny amoron-dranomasina. Ny faritra manodidina ny morontsiraka dia eo an-tampon'ny havoana izay zakan'ny mpitaingin-tsoavaly satria manome anao fahitana mahatalanjona ny moron-dranomasina sy ny ranomasina avy eny an-tampon'ny tampony.
Toerana misy- Waikato, Nosy Avaratra
Soso-kevitra: manaova angady ary mankanesa eto adiny roa alohan'ny onja, mba hahafahanao mamorona lohataona mafana sy miala sasatra amin'ity morontsiraka ity.
Ny morontsiraka dia iray amin'ireo toerana malaza be tototry ny mpizahatany satria io ihany no morontsiraka rano mafana azo zahana any Nouvelle Zélande. Ny rano amoron-dranomasina dia avy amin'ny renirano geothermal ambanin'ny tany izay mahatratra hatramin'ny 64m ny mari-pana ary feno mineraly toy ny Magnesium, Potassium, ary Calcium.
Toerana - Northland, North Island
Fampandrenesana Spoiler: Ny anaran'ny morontsiraka dia diso anarana fa 55 kilometatra fotsiny ny halavany raha ny tena izy.
Ny dongona an'ity morontsiraka malaza ity dia mamorona sary an-tsaina toy ny hoe manao safari an'efitra. Ny morontsiraka mipaka hatrany amin'ny tendrony avaratry ny Nouvelle-Zélande - Cape Reinga. Io no morontsiraka lehibe indrindra any Nouvelle Zélande ary ny ala Aupouri manodidina ny morontsiraka no mahatonga ny tontolo manodidina ho majika. Afaka miditra ao anaty fiara ianao ary mitondra fiara manamorona ny morontsirak'ity morontsiraka ity ary koa io dia arabe voasoratra anarana! Ity moron-dranomasina ity dia malaza matetika amin'ny karazana fanatanjahan-tena amin'ny rano ihany koa. ny hetsika fasika mahafinaritra sy mahafinaritra dia raisina eto dia ny bodyboarding izay a tsy maintsy andramana indrindra ho an'ny ankizy.
Makà topy maso ny eTA New Zealand Visa ary alamino ny vakansy nofinofisinao ho any Nouvelle Zélande.
Toerana - Awaroa, Nosy atsimo
Ny amoron-dranomasina dia anaram-bosotra hoe Golden bay noho ny morontsiraka fasika.
The fasika volamena sy ny rano turquoise amin'ity morontsiraka ity mivelatra hatrany amin'ny valan-javaboary Abel Tasman any amin'ny Nosy atsimo. Ny kirihitra sy ala maintso manodidina dia mahatonga an'ity torapasika ity ho tsara tarehy toy ny sary sy ny famaritana ny morontsiraka tonga lafatra. Ny Departemantan'ny Resadresaka dia miaro an'ity morontsiraka ity ary biby an-dranomasina sy an-tanety. Misy tobin'ny lasy antsasak'adiny miala amin'ity morontsiraka ity raha mitady ny hijanona eo akaiky ianao ary hankafy ny fiainana amoron-dranomasina. Misy fidirana Awaroa malaza akaikin'ny moron-dranomasina izay azon'ny taxi-be azo idirana, aza hadino ity traikefa ity.
Toerana - Coromandel, Nosy Avaratra
Ity morontsiraka ity dia manasongadina ny Tantaran'i Narnia
Ity morontsiraka ity dia azo alefa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alalàn'ny rano, noho izany ho an'ireo tia rano, ny traikefa nahafinaritra dia manomboka amin'ny fahatongavana any amin'ny cove. Azonao atao ny mamonjy ity morontsiraka ity amin'ny alàlan'ny kayak, sambo, na mandeha amin'ny cove. Misy vavahady voajanahary sy mahatalanjona voaforona eo amoron-dranomasina ity izay iray amin'ireo toerana voatsindry indrindra ao Nouvelle Zélande. Azonao atao ny misafidy ny hanao fitsangantsanganana ao amin'ny Fasika volamena an'ity Cove ity eo am-pifaliana ny rivotry ny ranomasina ary mijery ny onja.
Mety ho liana amin'ny dia any New Zealand Road koa ianao.
Toerana - Far North, North Island
Iray amin'ireo morontsiraka avaratra indrindra any Nouvelle-Zélande dia tsy misy mpizahatany matetika ary arovan'ny Departemantan'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fasika fotsy amin'ity morontsiraka ity dia saika fluorescent ary ny fahatsapana ny dongon'ny morontsiraka amin'ny tongotrao dia mahafinaritra. Ny dongona koa dia fonenan'ny vorona manao akany eto ary ampitandremana izy ireo mba hitandrina azy ireo. Ny trano fivarotana farany avaratra any Nouvelle Zélande dia tena akaiky an'ity morontsiraka ity.
Toerana - Waitaki, Nosy atsimo
Ny zavatra voalohany tonga ao an-tsainao rehefa mieritreritra ilay toerana ianao dia ireo vatobe. Izy ireo dia vato boribory miafina sy goavambe miforona noho ny fikaohin'ny vatobe sy ny onjan-dranomasina misamboaravoara. Na dia talanjona aza ireo mpizahatany amin'ny fahitana ireo vatolampy ireo, ny geolojista dia liana ihany koa amin'ireo vato ireo izay poakaty, boribory lavorary ary telo metatra ny savaivony. Izany dia nanjary nahatonga ny morontsiraka ho lasa tahiry siantifika arovana. Ny hatsaran-tarehy mahafinaritra amin'ity toerana misy ny moron-dranomasina ity dia tampoka rehefa mihaona amin'ny faravodilanitra ny masoandro, rehefa mankafy ny onja sy ny rivotra ianao eo afovoan'ny vatolampy.
Toerana –Navaratra atsimo, Nosy atsimo
Ity valan-javaboary ity na dia kely indrindra aza any Nouvelle Zélande dia fialofana kely ho an'ny torapasika. Maro ny morontsiraka mahafinaritra sy tsara tarehy manerana an'i Nouvelle-Zélande hita amin'ity morontsiraka iray ity. Efa voalaza ato amin'ity lisitra ity ny Morontsiraka Awaroa izay hita ao amin'ny Park. Ny morontsiraka malaza hafa dia ny Morontsirak'i Medlands fantatra amin'ny fasika volamena sy ny tontolo maitso mahafinaritra izay tototry ny mpizahatany hankafy Kayaking, Sandfly Beach izay hita lavitra ary tsy dia notsidihina firy fa ny taxi-be mandeha ao amin'ity morontsiraka mitokana sy tsy misy fotony ity dia azo tsidihina ny piknik mangingina amoron-dranomasina, Helodrano Torrent dia morontsiraka lava mamelatra izay tian'ny olona noho ny onja sy milomano, Morontsiraka Kaiteriteri izay hita fa ny vavahady mankamin'ny valan-javaboary dia heverina fa ny tsara indrindra any amin'ny nosy atsimo dia fanipazana vato avy any Nelson ary tranon'ny trozona, feso, feso ary penguin ary Bay Bay dia tora-pasika ahafahanao mitoby sy mijanona eo amoron-dranomasina ary ny fiposahan'ny masoandro avy amin'ity morontsiraka ity dia tsara tarehy toa azy.
Vakio bebe kokoa momba ny Valan-javaboary Abel Tasman.